၆၁ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့စကားဝိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သည်
(မဲဆောက်၊ ၄ ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၀၉)
ယနေ့ထိုင်း- မြန်မာ နယ်စပ် တနေရာမှာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သမဂ္ဂ (BPPU) က ဦးစီးပြီး လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် ပြောင်းလဲမှု အခင်းအကျင်းများ အပေါ် ဆွေးနွေး ဝေဖန်သုံးသပ်ကြတဲ့ စကားဝိုင်းတခု ကျင်းပပြုလုပ်သွားတယ်လို့သတင်း ရရှိပါတယ်။
BPPU ရဲ့နာယက ကြီး ဦးစိန်မင်းက " နိုင်ငံရေး သမားတွေ၊ နိုင်ငံရေး သမားပီသဖို့နဲ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ပီသအောင် ကြိုးစား အားထုတ်ကြဖို့" နှစ်(၅၀) တိုင် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံများ ထုတ်နုတ်တင်ပြရင် အခန်းအနား ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၅၀)ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ၊ တက်ရောက်လာသူတွေထဲမှာ 2009 CAC ခေါ်သည့် ၂၀၀၉ စုစည်း လှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး နှင့် အဖွဲ့ ဝင်များ၊ မျုိးဆက်သစ် ကျောင်းသား လူငယ်များ၊ KYWO အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဝင်များ၊ NLD အဖွဲ့ ဝင်များ၊ JACBA အဖွဲ့ သားများ၊ ရွှေဝါရောင် လူငယ်များ နှင့် ရဟန်းပျို တပါး ပါဝင် တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ တက်ရောက်လာသူ သထုံမြို့ နယ် လွှတ်တော်အမတ် ခွန်မြင့်ထွန်းက အဓိက ပါဝင်ဆွေးနွေး ချက်မှာ " လာမယ့် ဒဗ္ဗလင် အစည်း အဝေး ကြီးဟာ ဆိုရင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရ အပြန်အလှန် တာဝန်ခံမှုတွေကို ရေးဆွဲသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျုိးသား ညွန့် ပေါင်း အစိုးရကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့ စည်းဖို့မူချပြီး ဖြစ်လို့၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မထိခိုက်စေဘဲ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျုိးသား ညီညွတ်ရေး စင်ပြိုင် အစိုးရတရပ်ကို ဖွဲ့ စည်းသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရနှစ်ရပ် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပဲ၊ အစိုးရတရပ်တည်းသာ တည်ရှိဖွဲ့ စည်းသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း" ပြောကြားသွားပါတယ်။ တက်ရောက်လာသူတွေ ထဲမှ ABSDF စတင် ဖွဲ့ စည်းစဉ် ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့တဲ့၇၄ ကျောင်း သားဟောင်း ဦးမောင်မောင်တိတ် မှလည်း ထဲထဲဝင်ဝင် ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်ပါဝင် ဆွေးနွေး သွားခဲ့တယ်လို့သတင်း ရရှိပါတယ်။ ထူးခြားမှု တခုကတော့ တပါးတည်းသော ပါဝင်ဆွေးနွေး သူ ရဟန်းပျိုမှာ အရှင်ဇနကဘွဲ့အမည်ရှိပြီး သီရိလင်္ကာမှ မဲဆောက်သို့ပြောင်းရွေ့သီတင်း သုံးသူ ရွှေဝါရောင် ရဟန်းပျိုတပါးဟု သိရှိရပါသည်။
Posted by phesunn at 5:40 PM0comments
Credential Challenge ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးစိမ်ခေါ်မှုကိုဘယ်လိုစီစစ်သုံးသပ်နိုင်ပါသလဲ?
Posted by phesunn at 5:08 PM0comments
Posted by phesunn at 4:32 PM0comments
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး မဟာ ဗျူဟာ နည်းဗျူဟာများ-
၂၀၀၈ မေလမှာ စစ်ကောင်စီက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမိုင်းမှာ တတိယမြောက် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဥပဒေ အရ ၂၀၁၀ မှာ ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပပေးမယ် လို့ လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးမှာ အနိုင်ရပါတီကို အာဏာလွဲပြောင်းပေးပါ့မယ် လို့ လည်း ကမ္ဘာသိ ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံဆိုတာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာ မှတ်တိုင်ကြီး တတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်စန်းယု တို့ ရဲ့တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကို နိဂုံး ချုပ်စေခဲ့တယ်။ အာဏာလွှဲပြောင်း ရယူခဲ့တဲ့ စစ်ကောင်စီ (န၀တ) ဟာ ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်နဲ့ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပပေးမယ်လို့အာဏာသိမ်းစဉ်က ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။
လွတ်လပ်၍ တရားမျှတတဲ့ (၉၀) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်ကောင်စီရဲ့မဟာမိတ်ပါတီ ဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ (တစည) အပြတ်အသတ် ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး (၆)လ အတွင်းမှာ လွှတ်တော် ခေါ်ယူ ကျင်းပပေးရမယ့် အစား ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ရဲ့ကတိ က၀တ်တွေကို ပယ်ဖျက်လိုတာကြောင့် ဦးနေ၀င်း ဦးစန်းယုတို့ ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်လက်ထူထောင်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် အနှစ်(၂၀) ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ။ မြန်မာ ပြည်သူတွေ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကာလက မျှော်မှန်းတမ်းတခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်၊ ဒီမိုကရေစီ အစိုး ရ ဆိုတာတို့ ဟာ “ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး’’ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါ့ကြောင့်မို့လက်ရှိစစ်ဝါဒီတွေ ခံယူကျင့်သုံးနေတဲ့
(၁) ဗြူရိုကရက် အရင်းရှင်စီးပွားရေး စနစ် မြေယာ လက်ဝါးကြီးအုပ် အရင်းရှင်စနစ်
(၂) စစ်ဗြူရိုကရက် ယန္တရား ငါ့မင်း ငါ့ချင်း အုပ်ချုပ်မှုစနစ်
(၃) စစ်အာဏာရှင်စနစ် (ခေတ်သစ် ဖက်ဆစ် စနစ်) တို့ ကို တိုက်ဖျက်ခြေမှုန်းပစ်ရေး တို့ ဟာ မြန်မာ ပြည်သူတွေ ထမ်းဆောင်ကြရမယ့် သမိုင်းပေးတာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါစနစ် (၃) မျိုးတို့ ကို ဖျက်ဆီးပစ်ပြီး
(၁) ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ် (တံခါးပွင့် ၀ါဒ) တို့ ကိုကျင့်သုံးရမယ်။
(၂) ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်တို့ ကို ထူထောင်ရမယ်။
(၃) ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်တို့ ကို အသက်သွင်း အကောင်အထည်ဖော်ကြရမယ်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဖျက်ဆီးရမယ့် စနစ် (၃)မျိုးနဲ့တည်ဆောက်ရမယ့် စနစ်(၃)မျိုး တို့ ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ရဲ့မဟာဗျူဟာ တာဝန်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။
ဒါတွေတွင်မက စနစ်(၃)မျိုးတို့ ကို တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေက (၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် (၂) မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသား လူငယ်များ (၃) လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်များ (၄) ရဟန်းသံဃာတော်များ နဲ့ပြည်သူ့အလွှာပေါင်းစုံတို့ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ ဟာ သွေးစည်းညီညွတ်ကြပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြတ်သားစွာ တိုက်ပွဲဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်သူ မိတ်ဆွေ စည်းကြောင်းကို ရေးဆွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ မဟာ ဗျူဟာ ပြဿနာ တချို့ ကို ဖော်ပြလိုပါတယ်။
(၁) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့ ကို ချွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရမယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့ စည်းခွင့် စည်းလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ခွင့်ပြုရမယ်။
(၂) အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည်တဲ့ စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင် အကောင်အထည် ဖော်ပေး ရမယ်။
(၃) ပြည်တွင်းစစ်ကို ချက်ချင်းရပ်စဲပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင်ကျင်းပရမယ်။
(၄) ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ကုလသမဂ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများရဲ့မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အား ပေးထောက်ခံ ကူညီမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်၊ ကြိုဆိုရမယ်။
(၅) စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ဥပဒေတွင်း ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲများနဲ့မြေအောက်တစ်ပိုင်း ဖွဲ့စည်းမှု လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်လက်ဆင်နွှဲရမယ်။ တိုင်းပြည်အနှံ့ ဒေသအလိုက် တောင်းဆိုချက်များ တိုက်ပွဲပုံစံ မျိုးစုံတို့ ကို ဖော်ထုတ် ဆင်နွှဲတတ်ရမယ်။
ဒီကနေ့မြန်မာပြည်သူတွေ ဆင်နွှဲနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲတွင် အချောင်သမား အယူအဆ အတွေးအခေါ် မျိုးစုံတို့ ကို တိုက်ပွဲဆင်နွှဲ ရဲရမယ်။ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တို့ ကို အပြု ဖက်က ချဉ်းကပ်မှုများကို ပြတ်သားစွာ ဆန့် ကျင်ရမယ်။ ပြည်သူတို့ ရဲ့ရဲရင့်တဲ့ တိုက်စွမ်းရည်ကို ယုံကြည်သင့် ကြတယ်။ (၄၆) နှစ်ကြာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ၀ိုင်းဝန်းချေမှုန်းကြရမယ်။
အောင်ပွဲဆိုတာ တိုက်ရဲသူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by phesunn at 6:37 PM0comments
2. Thorolf Rafto Human Rights (Norway)1990
3. Sakharov Freedom of Thought (European Parliament)1991
5. Honorary Member International PEN(Norwegian Center)1991
6. Humanities Human Rights Award (USA)1991
7. Honorary Member International PLEN (Candian Center)1991
9. Annual Award of the international Human Rights Law Group(USA)1992
10. Honorary President Student's Union London School of Economics and Political Science (UK)1992
11. Honorary Member International PEN (English Centre)1992
12. Honorary Life Member University of London Union (UK)1992
13. Honorary Professional Fellowship Law and Society Trust (Sri Lanka)1992
14. Honorary Doctorate in Political Science Thammasat University (Thailand)1992
16. Prix Litteraire des Droits de I'Homme Nouveaux Droits de I'Homme, France 1992
17. Honorary Member World Commission on Culture and Development (UNESCO)1992
18. Member Academie Universelle des Cultures (Paris)1993
22. Honorary Doctorate of Law University of Toronto(Canada 1993)
23. The Freedom of the City Commune of Giugliano ,Italy 1993
25. Premio Mujer Progresista (Federacion Mujeres Progresistas Spanish Federation of Progressive Women, Madrid) 1993
27. Honorary Adviser Forum of Democratic Leaders in the Asia- Pacific 1994
36. Liberal International Prize (UK)1996
39. Rajiv Shmirti Parashka Rajiv Gandhi Memorial Award India 1996
40. Empty Chair Award Women of the Year Lunch, London UK 1996
41. Empty Chair Award Women of the Year Lunch, London, UK 1996
47. Honorary Citizenship of Rome (Italy) (May 23,1997)
49. Pearl S.Buck Woman's Award Pearl S.Buck Foundation (USA)1997
50. International Award St.Angela's Peace and Justice Group, Waterford (Eire) 1997
55. Honorary Doctorate of Laws University of Bristol (UK)1998
57. Honorary degree Université catholique de Louvain, Belgium –December 1998
58. Honorary Degree University of Bath (UK) –December 1998
59. Honorary Degree Bucknell University –May 1999
74. Honorary Degree in Political Science Thammasat University, Thailand 19/06/2005
75. Freedom of the City Award The City Council of Edinburgh, Scotland 16/06/2005
77. UNISON Honorary Membership UNISON, Britain's largest trade union June 2005
78. Olof Palme Prize Sweden February 2006
80. New Statesmen Magazine Hero New Statesmen Magazine May 2006
81. Netaji Subhas Chandra Bose International Deshprem Award, India March 19 2007
Posted by phesunn at 9:51 PM 1 comments
အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ 
အနီးခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမိုင်းမှာ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက်မှ ၁၉၆၂ မတ်လ(၂)ရက်နေ့ ထိ (၁၄)နှစ် ကြာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပါတီ အာဏာရှင် စနစ်ကတော့ ၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ အထိ (၂၆)နှစ် ကြာခဲ့ပါတယ်။ န၀တ နဲ့နအဖ စစ်အာဏာရှင်က ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ အနှစ်(၂၀)ကျော် တည်တံ့နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်ပြီး ၂၀၁၀ မှာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီက ကြေငြာထားပါတယ်။
သူတို့ကျင်းပမယ် ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘယ်လို အမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ? အတည်ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ ဥပဒေပါ အခြေခံ အချက်တွေကို စီစစ်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
အပိုဒ်(၅၇) - နိုင်ငံတော် သမ္မတနဲ့ဒုတိယ သမ္မတများသည် နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အပိုဒ်ငယ်(က) နိုင်ငံတော် သမ္မတကို သမ္မတ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေး အဖွဲ့ ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည်။
(၁) ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့ ။
(၂) အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့ ။
(၃) တပ်မတော် ဦးစီးချုပ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းသော တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အစု အဖွဲ့ ။
အပိုဒ်ငယ်(ဂ) ယင်းအစုအဖွဲ့တစ်ခုစီက ဒုတိယ သမ္မတ တစ်ဦးစီကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ထဲမှ ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သူများ ထဲမှ ဖြစ်စေ ရွေးချယ်တင်မြောက်ရမည်။
အပိုဒ်ငယ်(င) ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး ပါဝင်သော သမ္မတ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး အဖွဲ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတ လောင်းများဖြစ်သည့် ဒုတိယ သမ္မတ (၃)ဦးအနက် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဒုတိယ သမ္မတ တစ်ဦးကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ အဖြစ် ဆန္ဒ မဲပေး ရွေးချယ် တင်မြှောက်ရမည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ သို့ မဟုတ် ဒုတိယ သမ္မတများသည် မည်သည့်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်မျှ မဖြစ်စေရ။
အပိုဒ်ငယ်(က) နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေး အကြီးအကဲသည် နိုင်ငံတော် သမ္မတဖြစ်သည်။
အပိုဒ်(၂၀၀) နိုင်ငံတော်တွင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ ကို အောက်ဖော်ပြပါ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့ စည်းသည်။
(က) နိုင်ငံတော် သမ္မတ
(ခ) ဒုတိယ သမ္မတများ
(ဂ) ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ
(ဃ) ပြည်ထောင်စု ရှေ့ နေချုပ်
အမျုိးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ ဖွဲ့ စည်းခြင်း
အပိုဒ်(၂၀၁) ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ် အရ သော်လည်းကောင်း ပေးအပ် လာသည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင် နိုင်ရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့ စည်းသည်။
(ခ) ဒုတိယ သမ္မတ
(ဂ) ဒုတိယ သမ္မတ
(ဃ) ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ
(င) အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ
(စ) တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်
(ဆ) ဒု- တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်
(ဇ) ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန
(ဈ) နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန
(ည) ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန
(ဋ) နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန
အပိုဒ်ငယ်(ခ) နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ အဖြစ် ခန့် အပ်တာဝန်ပေးရန်၊
(၁) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှ ဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သူများထဲက ဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသော သင့်လျှော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရွေးချယ်ရမည်။
(၂) ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနများ အတွက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံမှ သင့်လျှော်သည့် တပ်မတော်သားများ၏ အမည် စာရင်းကို ရယူရမည်။
(၃)ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေး နှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဌာနများ အပြင် အခြားဝန်ကြီးဌာန များတွင် တပ်မတော်သားများအား ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများအဖြစ်
ခန့် အပ်တာဝန်ပေးလိုလျှင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဇ)ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများသည် နိုင်ငံတော် သမ္မတအား တာဝန်ခံရမည်။
(ဈ) ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးသည် လွှတ်တော် တရပ်ရပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လျှင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း ခံရသည့် နေ့ မှ စ၍ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရ မည်။
(ည) (၂) ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဌာနများ အတွက် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများအဖြစ် ခန့် အပ်ထားခြင်း ခံရသော တပ်မတော် သားများသည် တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစား ယူ ရန် သို့ မဟုတ် နုတ်ထွက်ရန် မလို။
(ဋ) ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးသည် နိုင်ငံရေး ပါတီတခုခု၏ အဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်လျှင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးအဖြစ်
ခန့် အပ်တာဝန် ပေးခြင်း ခံရသည့် နေ့ မှစ၍ မိမိရာထူး သက်တမ်းအတွင်း ယင်းပါတီ အဖွဲ့ အစည်း ၏ ပါတီလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။
(၃၄၂) နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် အမျုိးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ အဆိုပြုချက်၊ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကို ခန့် အပ်တာဝန်ပေးရမည်။
(၄၉၅) နိုင်ငံရေး ပါတီ တစ်ရပ်သည်
(က) စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း ပြည့်ဝသော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးရမည်။
(ခ) ဤဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လေးစား လိုက်နာရမည်။
(ဂ) နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် ဥပဒေနှင့် အညီ ဖွဲ့ စည်း မှတ်ပုံတင်ထားရမည်။
(က) နိုင်ငံတော် သမ္မတသည်( တိုင်းပြည် အခြေအနေ အရ လိုအပ်လျှင် )
တပ်မတော် ဦးစီးချုပ်အား နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေရေး ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရား စီရင်ရေး အာဏာတို့ ကို လွှဲအပ်ကြောင်း ကြေငြာရမည်။
နိုင်ငံတော် အာဏာလွှဲအပ်ခြင်း ခံရသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် ဥပဒေပြုရေး အာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာနှင့် တရားစီရင်ရေး အာဏာတို့ ကို မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ မိမိပါဝင်သည့်အဖွဲ့ အစည်း တစ်ရပ်တွင် ဖြစ်စေ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
အထက်မှာ ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားတဲ့ အပိုဒ်များအရ-
နအဖ အစိုးရ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ ဥပဒေအရ ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်နဲ့ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်
တို့ ကိုမည် သို့ မျှ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်စွမ်း ရှိမှာမဟုတ်ပါ။
မြန်မာ ပြည်သူတွေ တောင်းဆိုနေတာက ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တောင်းဆိုနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
" နိုင်ငံရေး ပါတီ တစ်ရပ်သည် (ခ) ဤဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲ ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရမည်။ (ဂ)နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် ဥပဒေနှင့် အညီ ဖွဲ့ စည်း မှတ်ပုံတင်ထားရမည်။ "
လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက လက်ရှိ အတည်ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဝေဖန်ခွင့် အကြံပေးခွင့် လုံးဝမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၇၅ % ကျော်က ထောက်ခံမှ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ခွင့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက သူတို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေကို မယုံကြည်သူ၊ လက်မခံနိုင်သူတွေကို နိုင်ငံရေးပါတီ
ဖွဲ့ စည်းခွင့်မရှိ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ကြံ့ဖွံ့ပါတီနဲ့တစည ပါတီနဲ့တသီးပုဂ္ဂလတွေသာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ အပြင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ဖွဲ့ စည်းရာမှာလည်း အပိုဒ်(၂၀၀) အရ
(က) နိုင်ငံတော် သမ္မတ (ခ) ဒုတိယသမ္မတများ(ဂ) ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများ (ဃ) ပြည်ထောင်စု ရှေ့ နေချုပ်တို့ပါဝင်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။
ဒုတိယသမ္မတ (၃)ယောက်မှာ စစ်ဦးစီးချုပ် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူ တစ်ဦး ပါဝင်တယ်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်(၆၆၄) ဦးမှာ စစ်ဦးစီးချုပ်ရွေးကောက်ထားသူက (၁၆၆) ယောက်ပါဝင်တယ်။ ကျန်တဲ့ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကြံ့ဖွံ့ပါတီနဲ့တစည ပါတီတို့ မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်နဲ့မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများနဲ့အခြားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေက ပါတီဖွဲ့ ခွင့် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပိုင်ခွင့် မရှိကြပါ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရနိုင်တဲ့ အဖွဲ့ တွေက ကြံ့ဖွံ့ တဖြစ်လဲ နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပါတီ (တစည) တို့ သာ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရမှာ အနိုင်ရကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ဖွဲ့ စည်းရာမှာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးတွေဟာ စစ်ဦးစီးချုပ်အဆိုပြုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဝန်ကြီးတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ က စစ်ရာထူးတွေ ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင် ထားနိုင်ပေမယ့် ကျန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ၀န်ကြီးတွေက၊ နိုင်ငံရေး ပါတီ တွေက နုတ်ထွက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့အင်အားမရှိတော့တဲ့ တသီးပုဂ္ဂလိက ၀န်ကြီးတွေ ဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဖွဲ့ စည်းပေးမယ့် အမျိုးသား လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေး ကောင်စီမှာ အဖွဲ့ ဝင်(၁၁)ဦး ရှိပါတယ်။ သမ္မတ (၁)ဦး၊ ဒုသမ္မတ(၂)ဦး၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ(၂)ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ် ၀န်ကြီး(၄)ဦး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် နဲ့ဒု-ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။ ပြည်သူလူထု ရွေးကောက်လိုက်သူများက ဒုသမ္မတ(၂)ဦးနဲ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ(၂)ဦးမျှသာ ပါဝင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ စစ်ဦးစီးချုပ်က အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာနဲ့ဥပဒေပြုရေး အာဏာတို့ ကို ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့် ရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မေလမှာ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုတာရဲ့အနှစ်ချုပ်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်ထောင်စု အစိုးရ ဆိုတာတို့ ဟာ နိုင်ငံတော် အာဏာ (၃)ရပ်မှာ ဘာအာဏာမှ မရှိတဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ရုပ်သေးရုပ်မျှသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေး သမားတွေဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာစစ်ဝါဒီတွေ မျက်လှည့်ပြပွဲသက်သက်မျှသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အခိုင်အမာ ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုမြင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ အကယ်၍ နအဖ အပေါ် ပြတ်သားမှု မရှိခဲ့ရင် နောက်ထပ် စစ်အာဏာရှင် စနစ် (၅)နှစ် (၁၀) နှစ် သက်ဆိုးရှည် သွားနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဝါဒီတွေကို အလှချယ်ပေးနေတဲ့ သခင်တင်မြ၊ ဦးချမ်းအေး၊ ဦးရဲထွန်း၊ အေးလွင်၊ တက္ကသိုလ် မြတ်သူနဲ့ပေါက်စတို့ လို လူမျိုးတွေကို ပြည်သူတွေက ပြတ်သားစွာ ၀ိုင်းပယ်ရှုံ့ ချဖို့ လို ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်း စတဲ့ ခေါင်းမာ ဂိုဏ်းသားတွေကို တော်လှန်ဖြုတ်ချပြီး စစ်ကောင်စီသစ်ကို ဖွဲ့ စည်းထူထောင်ဖို့လုံးပမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
"စစ်ကောင်စီသစ်ဟာ အောက်ဖော်ပြပါ မဟာဗျူဟာ သစ်တွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့ " လိုပါတယ်။
(၁)"တပ်မတော်ဟာ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးမှာ ဦးဆောင်မှု အခန်းက ပါဝင်ရမယ် "ဆိုတဲ့ သဘောထားကို စွန့်လွှတ်ရမယ်။
(၂)"လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ စစ်ဗိုလ် တမတ်သား ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်"ဆိုတဲ့ အယူအဆက
(၃)ဦးတင်ဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ခွန်ထွန်းဦးနဲ့မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားများ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးတို့ ကို လွှတ်ပေးရမယ်။
(၄)ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အသက်သွင်း အကောင်အထည်ဖော်ပေးရမယ်။
(၅)၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ဖြစ်ပွားနေတဲ့" ပြည်တွင်းစစ်ကို ချက်ချင်းရပ်စဲပြီး "
တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
(၆)အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး တို့ အတွက် စစ်ကောင်စီသစ်နဲ့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင်ကျင်းပရမယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ကိုလိုနီစနစ် ဖက်ဆစ်စနစ် တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ် တို့ ကို အနိုင်တိုက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။ စစ် အာဏာရှင်စနစ် အဆုံးသတ်ရေး အတွက် "ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံသစ်နဲ့(၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲ"
တို့ ကို ပြတ်သားစွာ ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲ ၀င်ဖို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
18 Dec ,2008
Posted by phesunn at 10:39 PM0comments
ဒါတွေဟာ မင်းကြောင့်လို့ဝိုင်းဝန်းပြစ်တင်ကြတဲ့အခါ
မင်းဟာ ခေါင်းအေးအေးနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်။
အားလုံးက မင်းကို မယုံသင်္ကာဖြစ်တဲ့အခါ
သူတို့ ကိုနားလည်စွာခွင့်လွတ်ရင်နဲ့ 
မင်းကိုမင်း ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင်။
အဲဒါအတွက်လည်း မမော မပန်းနေနိုင်မယ်ဆိုရင်။
မင်းရဲ့ အကြောင်း မဟုတ်မတရား မုသားစကားကြားရတဲ့အခါ
မင်းကလည်း အလိမ်အညာတွေနဲ့မတုန်လှုပ်ပြန်ဘူးဆိုရင်။
မင်းဟာ အမုန်းတွေ ပြန်မပွားဘူးဆိုရင်။
မင်းကိုယ်မင်း လူတော်တ်ယောက်ရယ်လို့မမြင်ပဲ
မျှော်မှန်ချက်သက်သက်သာ မဖြစ်စေပဲ တွေးခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်။
အောင်မြင်မှု သုခနဲ့ဆုံးရှုံးမှုဒုက္ခတွေကို ကြုံတွေ့ ရတဲ့အခါ
တူညီသော လောဓံတရားတွေပါလားရယ်လို့ 
မင်းဟာတည်ငြိမ်စွာနဲ့နာကြားနိုင်မယ်ဆိုရင်။
အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို
အင်မတန်မှ သေးငယ်လှတဲ့ တန်ဆာပလာအရာရာနဲ့ 
တလှည့်တခါတည်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်။
ဆိုးလှတဲ့ ကံကြမ္မာရယ်လို့ 
သူများတကာ လုပ်ပြီးသွားကြလို့ 
အားနဲ့ မာန်နဲ့ ဇွဲသတ္တိရှိရှိ ဆက်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်။
မင်းမှာ စိတ်အားကလွဲလို့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့တဲ့အခါ
လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့အခါ
မင်းကို သိပ်ပြီး နာကျည်းအောင် မလုပ်နိုင်စေရင်။
အဓိပ္ပါယ်ရှိလှတဲ့ စက္ကန့် ခြောက်ဆယ်အဖြစ်
Posted by phesunn at 8:00 PM0comments
ဆရာကျော်ဝင်း အင်တာဗျူးအပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များ
ခုတလောမှာ ဘာသာပြန် ဆရာ ကိုကျော်ဝင်းရဲ့အင်တာဗျူး (၉) ပုဒ်ကို စုပေါင်း ထုတ်ဝေ လိုက်တဲ့ (စာအုပ်များနဲ့ ထင်မြင်ချက်များ) စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်လို့ လဲ ကောင်း မိမိ မသိသေးတဲ့ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်တွေရဲ့အတွေးအမြင် အယူအဆ တွေကို လေ့လာခွင့် ရတဲ့ အတွက် ကိုကျော်ဝင်းကို ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ သူနဲ့ ကျနော် သိကျွမ်းခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း အစိတ် ခန့် ရှိခဲ့ပြီ ။ အဲဒီတုန်းက နရသိမ် စခန်းအတွင်းမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အဖြစ် သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့ တာပါ။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင် ရောက်တော့ သူဟာ နိုင်ငံရေးသမားဘ၀ကို စွန့် လွှတ်ပြီး ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်း ကလောင်ရှင် အဖြစ် သူ့ ဘ၀ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ဘာသာပြန် ဆောင်း ပါးတွေဟာ အလွန် အဆင့် အတန်း မြင့်တယ် လို့ယူဆမိတယ်။ တလေး တစားလည်း ဖတ် ဖြစ်တယ်။ ဘာသာပြန် ပညာရပ် အနေနဲ့မြင်ဆရာ တစ်ဦး လို့ လည်း သတ်မှတ် နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့လူချင်းပြန်ဆုံ ဖြစ်ပြီး ကျနော့်ရဲ့ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး တစ်ချို့သူ့ ဆီ ပို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ဖြစ်နေချိန်ပါ။ ဗွေဆော်ဦး အဖြစ်" ခေတ်သစ် အရင်းရှင်စနစ် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲပုံ" ကို သုံးသပ်ပြတဲ့ စီးပွားရေး ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်က ပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း အသုံးပြု ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ ဆောင်း ပါးကတော့ "ဆိုရှယ်လစ် စနစ် အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲပုံ "ကို သုံးသပ်တဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဘီဂျင်း- ရီဗျူး က ထုတ်နှုတ် ပြန်ခဲ့တာပါ။ အယ်ဒီတာက ထည့်ပေးခဲ့ ပေမယ့် စာပေစီစစ်ရေးက ဖြုတ် ပစ်လိုက်တယ်။
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ကို ဝေဖန်တာလို့ယူဆပုံ ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျနော်ဆောင်းပါး တစ်ချို့ ကို
စပယ်ဖြူ မှာ ဖော်ပြတာတွေ ရှိခဲ့သလို ပါယ်လိုက် တာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
အယ်ဒီတာ ကြိုက်ပေမယ့် စီစစ်ရေးက ဖြုတ်လိုက်တာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ (Asia Week) မှာပါခဲ့တဲ့" ကမ္ဘာ့
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ကျောင်းသင် ပညာရေး အဆက်အစပ်" ဆောင်းပါးကို အယ်ဒီတာ ကြိုက်ပေမယ့် စီစစ်ရေးက ဖြုတ်လိုက်တာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
အတိတ်ဆီ ပြန်ကြည့်ရင်တော့ ကိုကျော်ဝင်း မူလတန်း ကျောင်းသားအရွယ်မှာ ကျနော်က လက်ဝဲ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်နေပါပြီ။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး လှိုင်းလုံးတွေ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ရိုက်ခတ် နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူဟာ ကျနော့်ထက် နိုင်ငံရေးဝါ အများ ကြီး ငယ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန် စာပေတွေ ရေးသားရာမှာတော့ သူက ကျနော့်ထက် များစွာ စွမ်းရည် ထက်မြက်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင် ကာလက သူနဲ့ ကျနော် ဆက်ဆံရေး ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ကာလတွေ ကြတော့ သူဟာ ရေးအား အလွန်ကောင်းတဲ့ လူငယ် လူလတ်တွေ ရဲ့ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့ အောင်မြင်သူ ဘာသာပြန် ဂျာနယ် လစ် တစ်ဦး ဖြစ်လာပါတယ်။ အောင်မြင်မှု ရလာတဲ့ ဂျာနယ်လစ်ကို ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတွေက အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ်တွေ မှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။
အင်တာဗျူးတွေမှာ ပါတဲ့ သဘောတရား အယူအဆ တွေကို သူ့ ထက် နိုင်ငံရေး လုပ်သက် (၁၀) နှစ်ကျော် ကြီးတဲ့ ဆောင်းပါးရှင် သုံးဦးက ဝေဖန် ရေးသားခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ သုံးဦးဟာ နိုင်ငံရေး လုပ်သက်တွေ တူညီကြသလို နရသိမ် စခန်းတွေမှာ လေးကြိမ် လေးခါ ၀င်ရောက်ခဲ့ ဖူးသူတွေလည်း ဖြစ်ကြတယ်။ တစ်ယောက်က ကိုရိုး၊ တစ်ယောက်က ကိုအောင်၊ တစ်ယောက်က ကိုဆန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဆန်းဟာ ကိုကျော်ဝင်းရဲ့အင်တာဗျူး စာမူများနဲ့အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေး သမားများရဲ့ဆောင်းပါးတွေကို နောက်ထပ်နိုင်ငံရေး သမားတစ်ဦးဆီ ပေးဖတ်ခိုင်းပြီး ဝေဖန်ရေး မှတ်ချက် တောင်းခဲ့တယ်။ သူကလည်း နရသိမ် စခန်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာကျော် နေခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့သူ့ အမည်က ကိုတင် သူက ဆောင်းပါးတွေကို မှတ်ချက် ပေးပါတယ်။ ကိုအောင်ရဲ့ဆောင်းပါးက ကိုကျော်ဝင်း လည်မြိုကို ဒုတ်တိုနဲ့ ရိုက်တာမို့သူမကြိုက်။ ကိုရိုး ဆောင်းပါးကိုတော့ ထားဝယ် ကြိမ်နဲ့ခတ် စပ်စပ် ရိုက်နှက် ဆုံးမတာမို့သူကြိုက်ကြောင်း ရီကြဲကြဲနဲ့ပြောပါတယ်။ ကိုဆန်း ဆောင်းပါး က ရွှေဖော့ရိုးနဲ့နှိပ်နှက် ဆုံးမတာမို့ပျော့လွန်းလို့သူမကြိုက်လို့ဖြေပါတယ်။
၀ါရင့် နိုင်ငံရေး သမား လေးဦး အမြင်မတူကြတာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။ ကိုကျော်ဝင်းရဲ့အင်တာ ဗျူးတွေအပေါ် ဝေဖန်ရေးသား သူတွေ အမြင် မတူကြတာ အရင်းခံ အားဖြင့် တစ်ချက်ထဲ ရှိပါ တယ်။ ကိုရိုး၊ ကိုအောင်တို့ ရဲ့ဆောင်းပါးတွေက ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဆိုရှယ်လစ် စနစ် တွေပေါ်မှာ အခြေခံ ဝေဖန်ကြလို့ကိုတင်က ကြိုက်နှစ်သက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦး ရဲ့ဆောင်းပါးတွေ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေဆီ ပို့ ပေးတော့ ဘယ်တိုက်ကမှ မထည့်ရဲ ကြပါ။ ကျော်ဝင်း နောက်မှာ လူငယ် လူလတ် စာဖတ်သူတွေ ရှိကြတယ်။ မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတွေ ဟာ စာဖတ် သူအကြိုက်ကို ဆန့် ကျင်လို့မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကိုဆန်း ကလည်း သူ့ ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးကို မဂ္ဂဇင်းတိုက် ပို့ ပေးပါတယ်။ အယ်ဒီတာ ကလည်း ထည့်ပေးတယ်။ စီစစ်ရေး ကလည်း မဖြတ်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကိုဆန်း က ဒီမိုကရက်တစ် လစ်ဘရယ် ၀ါဒ အခြေခံနဲ့ရေးလို့ ပါ။ ပျော့ပြောင်းတဲ့ ဝေဖန်ရေး ဖြစ်ပါ တယ်။ ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးတွေ အပေါ် ဒီမျှသာ ရေးလိုပါတယ်။
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကျော်ဝင်းကို အကြံပေးလို ပါတယ်။ ခုတလော ဦးချမ်း အေး ဆောင်းပါးတွေ မီဒီယာတွေ ပေါ်မှာ ဖော်ပြလာပါတယ်။ ဘာသာပြန် ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဦးချမ်းအေးဟာ ကိုကျော်ဝင်း ရဲ့ဆရာတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ် ပြီး ဦးချမ်းအေးရဲ့နိုင်ငံရေး ဆောင်းပါးတွေကို ကန့် ကွက်ဖို့လိုပါတယ်။ စစ်ဗိုလ် နောက်မြီးဆွဲ အယူအဆတွေကို ဝေဖန် တိုက်ခိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဦးချမ်းအေး နောက်လိုက် လုပ်ခဲ့ရင်တော့ စာဖတ်သူတွေရဲ့လေးစားမှု တန်ဖိုးထားမှု တွေ ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီကနေ့မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ကစား ကြဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါ။ စစ်ဝါ ဒီတွေရဲ့ဖွဲ့ စည်းပုံသစ်ကို ဆုတ်ဖြဲပစ် ဖို့ လိုပါတယ်။ တပ်မတော် ဆိုတာ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး မှာ ဦးဆောင်မှု အခန်းက ပါဝင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အာဏာရူး ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အတွေးအမြင်ကို ပြတ်သားစွာ ဆန့် ကျင်ဖို့လိုပါတယ်။ လူထုကြီးရဲ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ အင်အားစုတွေက ရဲရင့်စွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားရမယ့် အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးအစမှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ကိုကျော်ဝင်း ရဲ့အင်တာဗျူး ဆောင်းပါးမှာ ပါရှိတဲ့ စာပိုဒ် တစ်ခုကို ဖော်ပြလို ပါတယ်။
"ကျနော့် အရင် စာရေးခဲ့သူတွေ ကျနော်နဲ့ခေတ်ပြိုင် စာရေးနေသူတွေ အားလုံးကို ( အယူအ ဆ တူတာ မတူတာ အပထား) သင်ဆရာ မြင်ဆရာ လို့ သဘောထား ပါတယ်။ ကျနော် ရေးတာ ပြောတာတွေမှာ ဒီဆရာတွေ အတွက် ထိခိုက်စရာ များပါခဲ့ရင် ကိုယ့်ထက်ကြီးသူ အားလုံးကို ၀န်ချ တောင်းပန်ပါတယ်။ သက်တူ ရွယ်တူနဲ့ငယ်သူ အားလုံးကို လေးလေး စားစား တောင်းပန် ပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မဆို အချစ်အခင် မပျက် လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲ လွဲ လိုပါတယ်။" ( အင်တာဗျူး - ၃ စာမျက်နှာ ၇၄ )
အထက်ပါ စာပိုဒ်ကို ဖတ်ရတော့ ရင်းနှီးခဲ့သူ တစ်ဦးအနေနဲ့စိတ်ထိခိုက်မှု ဖြစ်ရပါတယ်။ ပညာမာန ထောင်လွှားမှု ကင်းတဲ့ ဂျာနယ်လစ် ကိုကျော်ဝင်းကို ချီးကျူးမိပါတယ်။
ပစ္စက္ခ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးမှာ ကိုကျော်ဝင်း အတွက် အရေးကြီးတာက ၀ါရင့် ကလောင်ရှင်တွေကို တောင်းပန်ဖို့မလိုပါ။ ဘာသာပြန် ဆရာကြီး ဦးချမ်းအေးရဲ့နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ် အယူအ ဆတွေရဲ့စက်ကွင်းက လွတ်အောင် နေတတ်ဖို့အထူးလိုပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်နောက်လိုက် နိုင်ငံရေး အမြင်တွေကို မဆန့် ကျင်နိုင်ရင် နရသိမ် စခန်းတွေမှာ သုံးကြိမ် သုံးခါ နေခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျာနယ်လစ် ကိုကျော်ဝင်းကို စာဖတ်သူတွေရဲ့ကျောခိုင်းမှု ခံရမှာတော့ သေချာပါတယ်။
၂၆. ၁၁. ၂၀၀၈
Posted by phesunn at 6:06 PM 1 comments
နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အင်အားစုမျာသို့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဟောင်းတဦး၏ ပြောဆိုချက်
ဒီလိုမျိုး နှစ်ကြီး ထောင်ဒဏ်တွေကို ၈၈ ကျောင်းသား လူငယ်များအပါဝင် နိုင်ငံရေး နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ ချမှတ် အပြစ်ပေးတာဟာ ပြည်သူလူထုကို ခြောက်လှန့် ရုံမဟုတ်ပဲ၊ စစ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက် တခုသာ ဖြစ်တယ်။
ပြည်သူ တွေကိုခြောက်လှန့် တာ၊ ခြိမ်းခြောက်တာ ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေက လုံးလုံး မမှု၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်တာ တောင် မမှုတာ။ ကြောက်အောင် ခြောက်လှန့် ရုံထင်ရင်တော့ အပေါ်ယံရှပ်ရှပ်ကလေးပဲ။ စစ်အစိုးရမှာ ဒီထက် စူနစ်တဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းရှိတယ်။ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို ဖမ်း၊ နှစ်ကြီးကြီးချ၊ ပြီး၊ လွတ်ပြမယ်။
Democratic Reform ကို ပုံစံတမျုိးနဲ့လုပ်ပြနေတာ။ ဦးဝင်းတင်ကို လွှတ်၊ ၈၈ နဲ့ဂမ္ဘီရ G.V အုပ်စုတွေကို အကြီးအကျယ် ရမယ်ရှာ၊ ထောင်ချပြ၊ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းက လက်မခံနိုင်လောက်အောင် ဗြောင်းဆန် ပြလိုက် တယ်။ ပြီးကာမှ - အလွှတ်ပြ၊ Positive လုပ်ပြရင် နိုင်ငံတကာက လိုက်ပါပြီး စစ်အစိုးရကို လက်ခံလာအောင် လှည့်စားပြမှာ။ လူ့ ယဉ်ကျေးမှု တခုလုံးကို မျက်လှည့်ပြနေတာ ဖြစ်တယ်။ နောက်လက်ကို မြင်စေချင်ပါတယ်။ သန်းရွှေရဲ့ ဆိုက်ဝါး ဖန်တီးချက်ဖြစ်တယ်။
ထောင် စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ (၅)မိနစ် ရေချိုးချိန် တိုးလိုက်သလိုပေါ့။ လုံးလုံး အခွင့်အရေး မရှိတဲ့ကြားမှာ အခွင့်အရေး ပေးသယောင်နဲ့နဂို ရှိရင်း ကိုပဲပြန်ရတာပါ။ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရသူတွေ ကတော့ ဒုန်ရင်း ၊ဒုန်ရင်း အရင်းအတိုင်းပါဘဲ။ ဥပမာ ပြောရရင် ရေထဲက ငါးကို ဖမ်းပြီး ရေထဲပြန်လွှတ်လိုက်၊ ခဏနေ ပြန်ဖမ်း ပြီးတော့ စေတနာရှင်ကြီး ကုသိုလ်ရှင်ကြီး လုပ်ပြီး ပြန်လွှတ်ပြန်၊ အဲသလိုမျိုး ။နောက်က၀ှက်နေတဲ့ လက်နဲ့စေတနာ ကိုမြင်စေချင်ပါတယ်။
၇၄-၇၇ မျိုးဆက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတဦး၏
Posted by phesunn at 3:22 PM0comments
စစ်အေးလွန်ခေတ်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု တည်ဆောက်နိုင်စွမ်း မရှိဖြစ်နေသလို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာလဲ အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး
ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဟာလေထုထဲမှာ ပြန့့်လွင့်နေဆဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးဟာလဲ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ကြပ်တည်းခက်ခဲကြပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ပဋိပက္ခတရားတွေအနေနဲ့ ခွဲခြမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် -
၁။စစ်ဝါဒီဗြူရိုကရက်တွေ မြေယာလက်ဝါးကြီးအုပ်အရင်းရှင်ကြီးတွေ ဘိန်းသူဌေး ကျောက်သူဌေး ကြီးတွေကတစ်ဖက်၊ အလုပ်သမားတွေ လယ်သမားတွေ ဓနရှင်ပေါက်စ ပညာတတ်တွေ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကတစ် ဖက် ဖြစ်နေတဲ့ အဓိက ပဋိပက္ခဟာ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ အဆုံးအဖြတ်နေရာမှာ ရောက်နေပါတယ်။ ရေပေါ်ဆီ တိုင်းရင်းသားဓနရှင် ၂၀% ကတစ်ဖက် ကျန်တဲ့ ပြည်သူ ၈၀ % တို့ ကတစ်ဖက် ဖြစ်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ကျန်နေတဲ့ အခြေခံ ပဋိပက္ခတွေကတော့ အလယ်အလတ်တိုင်းရင်းသား ဓနရှင်များတစ်ဖက် အ လုပ်သမား လယ်သမားနဲ့ ပညာတတ်ဓနရှင်ပေါက်စများကတစ်ဖက် ဖြစ်တည်နေပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားတဲ့ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များက တစ်ဖက် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသရှိ ပြည်သူတို့ ရဲ့အကြားမှာလဲပဋိပက္ခတွေတည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မဟာမိတ် မူဘောင်အတွင်းကသာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီအစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အကြားမှာလဲ ပြင်းထန် ထက်မြက်တဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေ ပါ တယ်။သံတမန်နည်းလမ်းတွေအရ အဖြေ ရှာကြရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ပဋိပက္ခတရားတွေနဲ့့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတန်းစား အလွှာ အသီးသီးတွေရဲ့ သဘောသဘာဝအရ ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုစနစ်တွေအရ- ဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ရင်လဲ စစ်ကောင်စီကိုယ်စားပြုတဲ့ ဗြူရိုကရက်- အရင်းရှင်စနစ် မြေယာလက်ဝါးကြီးအုပ်စနစ် ဗြူရိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် တို့ က တစ်ဖက် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ စနစ်တို့ ကတစ်ဖက် အနှစ်(၂၀)ကြာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာ သူသေ ကိုယ်ရှင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်
(၁)အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို အခြေပြုထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် လမ်းကြောင်း၊
(၂) အာဏာ(၃)ရပ် ကိုပြည်သူတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ရေး လမ်ကြောင်း ဆိုပြီး လမ်းကြောင်း(၂)သွယ် အခိုင်အမာ တည်ရှိနေပါတယ်။
ပထမလမ်းကြောင်းကို စစ်ဝါဒီတွေ ဘိန်းသူဋ္ဌေးတွေ ကျောက်သူဋ္ဌေးတွေက ကိုယ်စား ပြုနေပြီး ဒုတိယလမ်းကြောင်းကိုတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများရဟန်း
ရှင်လူပြည်သူတို့ က ကိုယ်စားပြုကြတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ဦးနေ၀င်း ဦးစန်းယု ဦးစိန်လွင်တို့ မှစတင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်ဗိုလ်ချုပ် ၀င်းမြင့်- ဗိုလ်ချုပ်တင်လှ- ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းတို့ အဆုံး- ဇါတ်သိမ်းမကောင်းကြသလိုမကြာမှီပါဘဲ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းတို့ ရဲ့ ဇါတ်သိမ်းမကောင်းကြပုံကို မြန်မာ ပြည်သူတွေ မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဟာအင်္ဂလ်ိပ်နယ်ချဲ့ ဂျပန်ဖက်ဆစ်တွေနဲ့ လွတ်လပ် ရေးရပြီးခေတ် အာဏာရအစိုးရတွေ မလုပ်ခဲ့တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူ အများ သတ်ဖြတ်မှုတွေးကို လက်ရဲ ဇက်ရဲ သုတ်သင်နေကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ ပြည်သူတွေဟာ သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမြတ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ ဟာ ဖောက်ပြန်တဲ့ လူမှုစနစ်တွေကို တိုက်ဖျက်ပစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့မြန်မာပြည်သစ်ကို မလွဲမ သွေတည်ဆောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by phesunn at 2:51 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံရေး အခြေခံပဋိပက္ခများ အဓိက ပဋိပက္ခကို ဘယ်လို သတ်မှတ်နိုင်ပါသလဲ
ဒီနေ့ ခေတ် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးဟာ အချိုးအကွေ့တစ်ခုဆီ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်နေသူ အားလုံး တိုင်းပြည်ရဲ့ ပကတိ အခြေအနေကို ပဋိပက္ခ တရား များရဲ့ရှုထောင့်ကနေ ဘယ်လိုခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ ကြည့်မလဲ။ နိုင်ငံရေ ဒဿန ပညာရပ်နဲ့သက်ဆိုင်သလို မဟာဗျူဟာ ပြဿနာ အဖြစ်လဲ ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။
သမိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကနေ အမှန်တရားရှားဖွေမယ် ဆိုရင် အခြေခံပဋိပက္ခများနဲ့ အဓိက ပဋိပက္ခ တွေကို အခိုင်အမာ ခွဲခြမ်း ကြည့်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံ ပဋိပက္ခတွေကို ဒီလိုခွဲခြမ်း နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၁) စစ်ဝါဒီ ဗြူရိုကရက်တွေ ဘိန်းဘုရင်တွေ “ငြိမ်းအဖွဲ့ ” ခေါင်းဆောင်ကြီးများ တစ်ဖက် - အလုပ်သမားတွေ လယ်သမားတွေ ပညာတတ် ဓနရှင် ပေါက်စတွေ အလယ်အလတ် တိုင်းရင်းသား ဓနရှင်တွေက တစ်ဖက် တည်ရှိနေတာကို တွေ့ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ ပဋိပက္ခတွေက အဓိက နေရာမှာ ရောက်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုရှုမြင် နိုင်မယ်ဆိုရင် ရန်သူ မိတ် ဆွေစည်းကြောင်းကိုလည်း ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
(၂) အခြား အခြေခံ ပဋိပက္ခ တစ်မျိုးကတော့ အလယ်အလတ် တိုင်းရင်းသား ဘဏ်လုပ်ငန်း ရှင်များ စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး - ကုန်သွယ်ရေး ဓနရှင်များက တစ်ဖက် အလုပ်သမားများ လယ်သမားများ ပညာတတ် ဓနရှင်များက တဖက် ရှိနေတဲ့ အခြေ ခံ ပဋိပက္ခဟာလဲ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီ ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းကိုင်တွယ်ရာမှာ မဟာမိတ် အဖြစ် ဆက်ဆံဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အခြားသော အခြေခံ ပဋိပက္ခတွေကတော့ မဟာဗမာ လူမျိုးကြီး ၀ါဒက တစ်ဖက် လူမျိုးစု ပေါင်းစုံ ပြည်သူတွေက တစ်ဖက် တည်ရှိနေတဲ့ ပဋိပက္ခ ကိုလည်း မဟာမိတ်ဘောင် အတွင်းက ဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များနဲ့သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစုတွေ အကြားမှာလည်း ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတွေ နဲ့ စစ်အစိုးရ ကြားမှာလည်း ပဋိပက္ခ ရှိနေပါတယ်။ သံတမန် နည်းလမ်း တွေနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ပဋိပက္ခ မျိုးစုံကြားမှာ စစ်ဝါဒီတွေနဲ့ပြည်သူလူထု အများစုကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ က အဓိက အကျဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန် ပဋိပက္ခ တွေက လက်အောက်ခံ ပဋိပက္ခ မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ပဋိပက္ခ ကို ဖြေရှင်း နိုင်ခဲ့ရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာလည်း ပြောင်းလဲသွား ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုခဲ့ပါ ပဋိပက္ခ တွေကို သိမြင်ပြီး မိမိတို့ ရဲ့ မဟာ ဗျူဟာ လမ်းစဉ် နည်းဗျူဟာ လမ်းစဉ်တွေကို နိုင်ငံရေး ပါတီတိုင်း ရေးဆွဲ ချမှတ်နိုင်စွမ်း ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ အာဏာရှင် စနစ် ဖျက်သိမ်းပစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ် ထူထောင် ရေးဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက ဗြူရိုကရက် အရှင်းရှင် စနစ် မြေယာ လက်ဝါးကြီးအုပ် စနစ် ဗြူရိုကရေစီ ယန္တရားနဲ့စစ်တပ် အာဏာပိုင်း စနစ်တို့ ကို အပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းပစ်ပြီး ဈေး ကွက်စီးပွားရေး စနစ် ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ အုပ်ချူပ်ရေးစနစ်နဲ့ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီတို့ ကို အကောင် အထည်ဖော်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာ လမ်းစဉ်တွေက ညီညွတ် နိုင်မှသာ ပြည်တွင်း - ပြည်ပ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေရဲ့ သွေးစည်း ညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းဗျူဟာ လမ်းစဉ်တွေ ဆိုတာက မဟာဗျူဟာ ရည်မှန်းချက်တွေ အတွက် ရန်သူအစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှု မျိုးစုံကို ရှောင်ရှားပြီး ပြည်သူတွေ ပါဝင်လှုပ်ရှားလာအောင် သိမ်းသွင်း စည်းလုံးရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေဟာ မိမိတို့ အင်အားစု တွေ အကျအဆုံး နည်းပါးအောင် ဖွဲ့ စည်းမှုအရ လှုပ်ရှားမှုအရ မတူညီတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
မြေအောက် တပိုင်း ဖွဲ့ စည်း လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနိုင်သလို တချို့ ကိစ္စ တွေမှာ ဗြောင် လှုပ်ရှားရ တာမျိုးလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ မြေအောက် လှုပ်ရှားမှုနဲ့မြေပေါ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို စည်းခြားဖို့ လိုပါ တယ်။ ရောထွေးခဲ့ရင် အကျအဆုံး များနိုင်ပါတယ်။ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အချိန်နဲ့နေရာတို့ ကို တိတိကျကျ စီမံတတ်သူ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ရန်သူတွေကို ရေရှည်အမြင်အရ လုံးဝအောင်ရမယ်။ လို့ စိတ်ဓါတ် စိုက်ထူကြရမယ်။ လက် တွေ့ ဖော်ဆောင်ရာ ရန်သူကို အလေးထားရမယ်။ အထင်သေးလို့ မရပါ။ ဒါကြောင့်မို့ဖောက်ပြန်သူတွေကို မဟာဗျူဟာ အရ စက္ကူကျားလို့သဘောထားရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် နည်း ဗျူဟာအရ တကယ့်ကျား၊ လူသားစား ကျားတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လေးနက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရန်သူတွေ အကြောင်းကို ပိုင်နိုင်စွာ သိဖို့ လို သလို မိမိတို့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလည်း နားလည် သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။
အောင်ပွဲ ဆိုတာ သူရဲကောင်းတို့ ရဲ့ စွန့် လွှတ် အနစ်နာ ခံမှုရဲ့ 
Posted by phesunn at 7:20 PM0comments
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဘယ်လိုအဖြေရှာကြမလဲ
ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ကြီးဟာ နိုင်ငံတကာ အရေးကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းပေးနေရတဲ့ အဖွဲ့ ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဆိုရှယ်လစ်အုပ်စု ပြိုကွဲသွားပြီး စစ်အေး တိုက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေက ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေး
ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ ကို လိုလားနေကြပါတယ်။ (၂၀)ရာစုကတည်းက ဖြစ် ပေါ်နေတဲ့ အစ္စလာမ် အကြမ်းဖက်ဝါဒဟာ
(၂၁) ရာစုထဲဝင်ရောက်လာ ကတည်းက ပိုမိုဆိုးဝါးတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူသတ်ပွဲတွေ တိုးတက်လုပ်ဆောင် လာခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂကြီးဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အာဖဂန်ပြဿနာ၊ အီရတ်ပြဿနာတို့ က
ရှေ့ တန်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ယ နေ့ တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိ ဖြစ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးဟာလဲ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ခေါင်းပေါ် ကျရောက်နေပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်မျိုးစုံစေလွှတ်ပြီး စစ်အစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအကြား စေ့စပ်ပေးရာမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ
ကြာညောင်းခဲ့ပေမယ့် ဘာတစ်ခုမှ အကြောင်းမထူးခဲ့ပါ။
ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေက စစ်အစိုးရရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ (Credential Challenge)။ ဒီအရေးနဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု
အတွင်း အဖွဲ့ အစည်း (၃) မျိုးရှိပါတယ်။
(၁) ပြည်ပရောက် စင်ပြိုင်အစိုးရ (၀ါ) အမျိုးသားညွန့် ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB)
(၂) ပြည်ပရောက် ရွေးချယ်ခံ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ သမဂ္ဂ (MPU)
(၃) မဲဆောက်အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ (NCUB)
(NCUB)ဟာ အမျိုးသားဖွဲ့ စည်းပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ တပ်ပေါင်းစု ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂထိုင်ခုံပေါ်မှ မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို ဆွဲချဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အထက် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ (၃) မျိုးအနက် အမျိုးသားညွန့် ပေါင်းအစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်တွေက သဘောမတူကြပါ။ သူတို့ ရဲ့ အကြောင်းပြချက်က အမျိုသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ စစ်အစိုးရတို့ အကြား စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကို ထိခိုက်ပျက်ပြားနိုင် တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဆန္ဒ နဲ့ လုံးဝဆန့် ကျင်နေပါတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေကို
ဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်လို့ ပြည်သူလူထုက ယူဆထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ညွန့် ပေါင်း အစိုးရရဲ့ သဘောထားဟာ
ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို လုံးဝဆန့် ကျင် ကျောခိုင်းရာရောက်နေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ ချုပ်ကြီးအနေနဲ့နိုင်ငံတစ်ခုချင်းအလိုက် ဆက်ဆံရာမှာ ပုံစံ (၃)မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
(၁) အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ကုလသမဂ္ဂလက် အောက်ခံအဖွဲ့ များရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို စေလွှတ်ပြီး ဆွေးနွေးဖြေရှင်း တာမျိုး ရှိပါတယ်။ လူ့ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ၊ ကလေး များရံပုံငွေအဖွဲ့ ၊
ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ စတဲ့ အဖွဲ့ တွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေစေလွှတ် ပြီး ဖြေရှင်းတာမျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ ဟာ အထွေထွေညီလာခံကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ် ချက်တွေ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ကြ ရပါတယ်။
(၂) အာဏာရှင်အစိုးရတွေကို အသိအမှတ်မပြုပဲ သံအမတ်တွေကို နေရာမ ပေး ဖယ်ချတာမျိုးလဲရှိပါတယ်။
(၃) လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွှတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအတွင်း တည်ငြိမ်ရေး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ ကို ၀င်ရောက် ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
(အီရတ်- ကူဝိတ်စစ်ပွဲ၊ လောလောဆယ်မှာ အာဖဂန်နိုင်ငံစစ်ပွဲ တို့ ဖြစ်ကြတယ်။)
မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာလည်း (၁၉၉၀) ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး လွှတ်တော်ခေါ် မပေးပဲ လူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခြင်း၊
တောတောင်တွေဆီမောင်းထုတ်လိုက်ခြင်း ပြုလုပ် ချိန်ကတည်းက ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ တွေ စေလွှတ်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ ကို ၀င်ရောက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း(၂၀) ကြာပြီးမှ စစ်အစိုးရကိုယ်စား လှယ် ကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးကို
ထိုင်ခုံပေါ်က ဆွဲချဖို့ ကြိုးစားတာဟာ အချိန် အခါအားဖြင့် အလွန်နောက်ကျနေတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ (Credential Challenge) ။ ညွန့် ပေါင်းအစိုးရက ဒီအဆိုပြုချက်ကို ငြင်းဆန် နေတာဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အလွန်အကျည်းတန်လှပါတယ်။
အကယ်၍ ဒီအဆိုအောင်မြင်ခဲ့ရင် နိုင်ငံတကာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးမှာ စစ်အ စိုးရအထိနာနိုင်ပါတယ်။ တရုတ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ရုရှား တို့ နဲ့ ဆက်ဆံရေးသွေးအေး သွားနိုင်သလို အေစီယန် (Asian) နိုင်ငံတွေအတွင်းမှာ ဆက်ဆံရေးတွေ ပဋိပက္ခဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ အမိန့် နာခံနေရတဲ့ လက် အောက်ခံ ဗိုလ်ချုပ်တွေအကြားမှာ ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါ တယ်။ မြန်မာသံအမတ်ကြီးကို ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ပါယ်လိုက်ရင် မြန်မာပြည် သူတွေ ရွှင်လန်းအားတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေးတိုက်ပွဲကို အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်။
စစ်ဝါဒီတွေဟာ အလွန်တရာခေါင်းမာသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာ အရင်းအနှီးတွေပေးဆပ်ပြီး အောင်ပွဲရသည်အ ထိ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
Posted by phesunn at 2:02 PM2comments
၆၁ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့စကားဝိုင်း ကျင်းပပြုလ...
Credential Challenge ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးစိမ်ခေါ်မှုကို...
ယနေ့ မြန်မာB.P.P.Uလမင်းခင်ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေB.B.CV.O.AR.F.AD.V.Bမိုးမခခေတ်ပြိုင်ရိုးမ ၃ဧရာဝတီမဇ္ဈိမဟစ်တိုင်မင်းဒင်ဖိုးတရုတ်မိုးသီးဇွန်ခင်မင်းဇော်ဇာဂနာ